Body Shaming လုပ်ခံရမှာ သိပေမယ့် လက်မောင်း နဲ့ပေါင်တွေ အရမ်းတုတ်ပြီး ဗိုက်ခေါက်တွေ ထွက်လာတဲ့ပုံလေးကို ချပြလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး – Let Pan Daily
မင်းသမီးချောလေး နေခြည်ဦးကတော့ Beauty Blogger အဖြစ် အောင်မြင်မှုတွေကို စတင် ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ နေခြည်ဦးက သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါ တက်လှမ်းလာပြီး အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာရရှိအောင် ကြိုးစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဆိုရင် နေခြည်ဦးက နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးနေရသလို ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုလည်း ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
နေခြည်ဦးက လတ်တလောမှာ အလုပ်တွေကိုအာရုံ စိုက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်လို့ အရင်ကလို လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်မလုပ်ဖြစ်တော့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် နေခြည်ဦးက လက်မောင်းတွေ၊ ပေါင်တွေတုတ်ပြီး ဗိုက်ခေါက်ထွက်လာတာကြောင့် Weight Loss Challenge လုပ်တော့မယ့်အကြောင်း ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နေခြည်ဦး ကတော့ Body Shaming လုပ်ခံရမှာကိုသိပေမယ့်လည်း သူမရဲ့လက်ရှိပုံလေးကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ချပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နေခြည်ဦးက “61kg 160cm ပါ လက်မောင်းတွေပေါင်တွေ အရမ်းတုတ် ဗိုက်ခေါက်တွေထွက်လာလို့ဒီ challenge လေး join ပါတယ်။ Notawork out program ပါ။ ကိုယ့်ပုံမှန် အစားအသောက်ကို စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ ဆင်ခြင်လျှော့စားမယ်ကွာဆို ဘယ်သူမဆို ဝင်ပါလို့ရပါတယ်။ hashtag လေးနဲ့ တင်ပေးပါ။
နေခြည် ဘာစားလဲကို story မှာ တောက်လျှောက်တင်ထားပေးမယ်။ နောက်အပတ် Wednesday မှာ winner3ယောက် ကို Real Slim7days program လက်ဆောင် ပေးမယ်။ 2021 new year မှာ အရမ်းမိုက် နေရမယ် this is just the beginning !!! CHALLENGE YOURSELF !!! Body Shaming လုပ်သော comment များဖတ်ချင်ရင် comment မှာကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသော မိန်းကလေးကို ကြည့်ချင်ရင် ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ I challenge You. You challenge Me!! Lets see who wins in 7days.chichi7daysweightlosschallenge” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေ ကိုပါ Challenge လေးခေါ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Source & Photo Credit-“beautybynaychi” FB Page
ၿငိမ္းျမတ္သူ ရဲ႕ catwalk ေလွ်ာက္ေနတဲ့ ဟန္ပန္ဟာ ကလပ္ အလွမယ္ေ႐ြးတဲ့ အထာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဒဲ့ေျပာလိုက္တဲ့ အလွမယ္ ခင္႐ူပ